Guadalest, guta reroto mudunhu reAlicante | Kufamba Nhau
Guadalest nderimwe remaguta akasarudzika uye akanaka mu Dunhu reAlicante. Iri munzvimbo ye Marina Baja, rine guta rayo Villajoyosa, asi haina gungwa. Zvakapesana kwazvo, iri pachikomo uye yakakomberedzwa nenzvimbo dzakakwirira dzakanyanya munzvimbo senge Sierra de Aitana no wave the Xortà.
Akaziviswa Nhoroondo-Artistic Complex muna 1974, Guadalest iriwo chikamu che network ye Maguta akanaka kwazvo muSpain. Inotongwa nenhare yayo inoshamisa, kufamba mumigwagwa yayo yakamanikana yedzimba chena uye kushanyira mamuseum ayo anokupa iwe yakasarudzika ruzivo. Kana iwe uchida kuziva zvirinani Iyo Castell de Guadalest, sekudaidzwa kuri kuitwa guta iri, tinokukurudzira kuti uenderere mberi nekuverenga.
1 Chii chekuona kuGuadalest
1.1 Nhare yeGuadalest
1.2 Chechi yeMukadzi Wedu weKukwidzwa
1.3 Imba yaOrduña
1.5 Mamiziyamu eGuadalest
2 Zvokuita mutaundi reAlicante
3 Chii chokudya muGuadalest
4 Ungasvika sei kudhorobha
5 Ndeipi nguva yakanakisa yekushanyira Guadalest
Chii chekuona kuGuadalest
Kunze kwekunakidzwa nemaonero anoyevedza anopiwa neayo maonero, MuGuadalest une inonakidza monumental nhaka uye mukana wekuita zvimwe zviitiko. Tiri kuzokuratidza zvaunofanira kuona mudhorobha reAlicante.
Zvakare inonzi castle yesan jose, inhare yekare yechiMuslim kubva muzana ramakore regumi nerimwe. Yakaverengerwa munzvimbo yepamusoro-soro yeguta, yaive nehunyanzvi hwekukosha panguva yeMiddle Ages. Zvisinei, kudengenyeka kwenyika mbiri uye kukakavara senge Hondo yeRusununguko zvakakonzera mamiriro azvino, anenge ave matongo. Nekudaro, iwe unogona achiri kushanyira zvisaririra zvake.
Chechi yeMukadzi Wedu weKukwidzwa
Yakavakwa muzana ramakore rechi XNUMX zvichitevera macanon eiyo baroqueZvakare zvakakanganisa kukuvara kwakamanikidza kuti idzorerwe muna 1962 nekubvisa dome uye transept. Mukati mune yakakosha arti yakagadzirwa nemugadziri wekhabati Jose Maria Moya uye mupendi David Mufundisi. Seizvo zita rechechi rinoratidzira, inomiririra Annunciation uye hupenyu hwaJesu Kristu.
Icho chivakwa chikuru chakanakisa muGuadalest. Yakavakwa mushure mekudengenyeka kwenyika kwe1644 uye yakatumidzwa zita remhuri yeOrduña, iyo yaitonga guta kwemakore mazana matatu. Parizvino ndiyo dzimbahwe re matunhu emumuseum Inoratidzira XNUMXth century fenicha, XNUMXth century pendi, zvedongo kuunganidzwa, mepu, vintage mifananidzo uye zvimwe zvakawanda zvinhu.
Sezvineiwo, pauriri hwepasi peGuadalest Town Hall iwe unogona zvakare kushanyira jeri rezana ramakore rechiXNUMX rinotitungamira kuti tikutaurire pamusoro pemamyuziyamu emuno nekuti pane imwe yakatsaurirwa chaizvo kumatiroko epakati pekare.
Pamwe pamwe nerunako rukuru rweguta iri reAlicante, iwe unozoshamiswa nehuwandu hwe mamiziyamu anoda kuziva yakapihwa mushanyi. Isu tato taura iyo Nhoroondo yeMiddle Ages, ine zvinhu zvayo zvinovhiringidza zvekutambudza uye zvekare neCasa Orduña. Asi kune zvimwe zvakatonyanya kushamisa.
Ndiyo nyaya ye microgiant miziyamu, umo iwe unogona kuona zvinoshamisa zvigunwe. Semuenzaniso, Goya 'Kuurayiwa kwaMay Mbiri' mune tsanga yemupunga, nzombe yakavakirwa pamusoro wepini kana Statue yeRusununguko mukati meziso retsono. Zvese zvisikwa zvemuenzi Manuel Ussá, inoonekwa seimwe yeakanakisa microminiaturists munyika.
Pasina zvishoma kuziva ndeye iyo Bhetrehema miziyamu uye Zvidhori mauri iwe unogona kuona akawanda ekare matoyi uye mamiriro ecological kuberekwa. Uye zvakafanana zvinogona kutaurwa nezve miziyamu yemunyu uye mhirizhonga, iyo ine zvidimbu zvinodarika zviuru makumi maviri, zvimwe zvacho zvichibva pamakore zana namazana masere apfuura.
Kune rimwe divi, zvakaenzana runako ndiyo iyo Ethnographic miziyamu, iyo inodzosera hupenyu hwevagari vemupata weGuadalest munguva yakapfuura. Zvipfeko zvakajairika, fenicha nemidziyo yekushandisa zuva nezuva zvinogadzira zvinhu zvinoratidzwa munzvimbo ino.
Yemukati yeiyo Orduña imba
Pakupedzisira, the miziyamu Kuunganidzwa kweHistorical Mota Inokuratidza 140 emidhudhudhu uye mota dzevintage mune yakanaka kamuri. Iwe zvakare uchawana pano zvimwe zvimwe zvidimbu zvekare senge michina yekusonesa, nhare, mawairesi uye kunyange vanoita kofi.
Zvokuita mutaundi reAlicante
Kunze kwekushanyira zvivakwa uye mamuseum, iyo Alicante taundi inzvimbo yakakwana yeiyo trekking. Nzira dzinoverengeka dzinotanga kubva mumigwagwa yayo. Semuenzaniso, iyo inokwira kusvika Xortà musangano kupfuura neCerro de los Parados. Kana zvakare iyo inotungamira kune Castell de Castells.
Dzese nzira dzinogovana mafambiro kusvika Loma del Blocón, asi ipapo mumwe anoenderera ku Yew tsime, nepo imwe ichisvika pamusoro peCastell de Castell, kwaunogona kuona iyo Arcs nzvimbo nemapako emapako e Pla de Petracos.
Chii chokudya muGuadalest
Mushure meaya makwara ekukwira, nzara yako inenge yashanda. Mutaundi reValencian Nharaunda une maresitorendi anokupa iwo chaiwo madhishi.
Dzimwe dzadzo ndidzo mupunga nemathenipisi nebhinzi, the mhiripiri, the tsuro ali oli and the Miriwo Yakabikwa. Yakanyanya kusimba ndiyo iyo olleta de blat, iyo ine gorosi, nyama yenguruve, mbatatisi, hanyanisi, matomatisi, rukato nebhinzi, zvese zvakabikwa muhari yechinyakare.
Kune chikamu chayo, the mincho imhando yepiza iyo ine miriwo, hove uye mapundu, nepo iyo chibage mabhora Dzinofanana nenyama, kunyange isina nyama asi mbatatisi dzakabikwa, chingwa nemazai.
Ungasvika sei kudhorobha
Kunyangwe paine bhazi mutsetse iyo inosvika kuguta reAlicante, nzira yakanakisa yekusvika imomo nemotokari. Kana iwe uchifamba kubva Benidorm kana kubva kuAlcoy naCocentaina, iyo nzira yaunofanira kutora ndiyo CV-70. Kune rimwe divi, kana iwe uchifamba uchibva Altea, iyo yakanakisa nzira ndiyo iyo CV-755.
Ndeipi nguva yakanakisa yekushanyira Guadalest
Nzvimbo yeGuadalest ine mamiriro ekunze erudzi Mediterranean, nechando chisinganyoro uye nguva inopisa. Nekudaro, sezvo iro guta riri pakakwirira kwemamita angangoita mazana matanhatu uye rakakomberedzwa nemakomo, mamiriro ekunze akasiyana zvishoma. Nekudaro, mwaka wayo wechando unotonhora uye mwaka unowedzera kunakidza maererano nekupisa.
Naizvozvo, yakanyanya kunaka nguva yekuti iwe ushanyire Guadalest iri chirimo. Uye zvakare, pakati paAugust yavo mhemberero mukukudza Jehovha Mhandara yeKukwidzwa, iro iro dhorobha rinotonyanya kunakidzwa.
Mukupedzisa, Guadalest ine zvakawanda zvekukupa iwe. Iri iguta rakanaka rakavakirwa pamawere uye rinotongwa neyakavakirwa imba yaro ine mamuseum anoshamisa uye nharaunda dzinoyevedza. Kana kune izvi zvese iwe uchiwedzera yakasarudzika gastronomy, iwe une zvese zvinhu zvekuita kuti kushanya kwako kushamise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways » Guadalest